दैनिक आम्दानीमा साङ्गभन्दा कम छैनन् सुरेश ! – Chitwan Post
दैनिक आम्दानीमा साङ्गभन्दा कम छैनन् सुरेश !
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर १६, २०७१
नारायणगढ । पूरा ठेगानासम्म बताउन नसक्ने बाराका सुरेश राम आफैँ अपाङ्ग छन् । दाहिने खुट्टा नहँुदा उनी वैशाखीको साहाराले हिँडडुल गर्छन् । तर पनि उनले अहिले दैनिक गरिरहेको कमाइ सुन्दा लाग्छ उनी कुनै पनि साङ्ग भन्दा कम छैनन् ।
सुरेशको बीस वर्षदेखिको काम एउटै हो, जुत्त ा सिलाउने । नारायणगढको लायन्सचोकनजिकै पर्ने कृषि विकास बैंकअगाडि सडक पेटीमा उनी हरेक बिहान ७ बज्दा नबज्दै आइपुग्छन् । अनि बोराको झोलाबाट जुत्ताको ब्रस, पोलिस र सियो लिएर जुत्ता सिलाउन बस्छन् ।
अहिले जुत्ता सिलाएरै उनले दैनिक एक हजार रुपैयाँका हाराहारीमा कमाइरहेका छन् । यसलाई महिनामा हेर्ने हो भने तीस हजार रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम नेपाल सरकारका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले खाने तलबभन्दा पनि बढी हो ।
‘जुत्ता सिलाएर के हुन्छ र हजुर, त्यस्तै दिनको हजार रुपैयाँ जति हुन्छ’, आफ्नो कमाइका बारेमा जनाउँदै उनले भने, ‘एक छोरा, दुई छोरीसहितका पाँचजनाको परिवार जिनोतिनो पालिरहेको छु ।’
घर भाडा र बिहान बेलुकाको खानामा उनको मासिक १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । केटाकेटी सानै रहेकाले उनीहरुको पढाइ खर्च त्यति छैन । ‘महिनाको खर्च कटाएर दस–पन्ध्र हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ’, उनले भने ।
३५ वर्षीय सुरेशले जन्मिएको दुई वर्षमै दाहिने खुट्टा गुमाउन पुगे । ‘दुई वर्षमा पोलेको खुट्टा कहिलै निको भएन, बरु खुट्टै काट्नु पर्ने भयो’, उनले भने । आफ्नो उपचारमा भएको एक कठ्ठा जग्गासमेत सकिएको बताउँदै उनले भने, ‘बारामा मात्रै हैन, काठमाडांैमै गएर पनि खुट्टाको उपचार गराएँ ।’
अहिले बाह्रघरेमा डेरा लिएर बसेका सुरेश बिहान वैशाखी टेकेरै लायन्सचोक आउँछन् र बेलुका पनि उसैगरी डेरामा फर्कन्छन् । अपाङ्ग भएकै कारण आफूलाई कहिलै हिनताबोध नभएको बताउने सुरेश कृत्रिम खुट्टा भएको कुरा सुनेका छन् । ‘हाम्रो पहुचले कृत्रिम खुट्टा राख्न सकिँदैन’, जुत्ता सिलाउँदै गर्दा गम्भीर भएर उनले भने, ‘कुनै दाता भेटिए कृत्रिम खुट्टा राख्ने थिएँ ।’
रोजगारीका लागि विदेश नै हानिनुपर्छ भन्ने युवाहरुका लागि सुरेश एउटा अनुकरणीय पात्र हुन् । स्वरोजगार भए विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्नका लागि । अझै साङ्ग रहेर पनि रोजगारीको खोजी गरी भौँतारिरहेका लाखौ युवाहरुका लागि पनि उनी एउटा उत्प्रेरणा बन्न सक्छन् । भन्छन्, ‘काम गरे माम खान गाह्रो छैन, कुरा गरेरमात्रै केही हँुदैन ।’
क्यान्सर ः कारण थाहा छ तर जोगिने चाहना छैन
रूकुम घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग
कोरोनाबाट ९०१ जना संक्रमित, पाँचौँ व्यक्तिको मृत्यु